Tapakilan'ny fiaran-dalamby SNCB mora vidy sy vidin'ny dia | Save A Train
Tapakilan'ny fiaran-dalamby SNCB mora vidy sy vidin'ny dia
an-trano > Tapakilan'ny fiaran-dalamby SNCB mora vidy sy vidin'ny dia
Eto ianao no afaka mahita ny fampahalalana rehetra momba Tapakilan'ny lamasinina SNCB mora vidy SY Vidin'ny fitsangatsanganana SNCB sy ny tombony.
Lohahevitra: 1. SNCB avy amin'ny High Highlight
2. Momba ny SNCB 3. Topy hevi-baovao hahazoana tapakila fiaran-dalamby SNCB mora vidy
4. Ohatrinona ny tapakila SNCB 5. Fa maninona no tsara kokoa ny mitondra lamasinina SNCB, ary tsy mandeha amin'ny fiaramanidina
6. Inona no mahasamihafa ny kilasy voalohany sy ny faharoa?? 7. Misy famandrihana SNCB ve
8. Mandra-pahoviana vao tonga ny SNCB 9. Inona ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina SNCB
10. Iza amin'ireo gara no aroson'ny SNCB 11. FAQ SNCB
SNCB avy amin'ny High Highlight
Ny orinasam-pirenena fiaran-dalamby, SNCB, manompo 244 mpandeha an-tapitrisany isan-taona.
Isan'andro, mandray ny orinasam-pirenena 61 olona an'arivony ao Belzika sy any amin'ny toerana itodihany manerana an'i Eropa.
Ny orinasam-pirenena dia ny mpamatsy tolotra fivezivezena lehibe indrindra ao Belzika.
Momba ny SNCB
Ny lalamby nasionalin'ny lalamby any Belzika, SNCB, dia naorina tamin'ny 1926.
Manolotra SNCB serivisy lalamby ao Belzika ary manerana an'i Eoropa. Miaraka amin'ny tapakila mety, azonao atao ny mitsidika ny tsara indrindra toerana fialan-tsasatra any Eropa. Miaraka amin'ny sokajin'ny sokajy sy ny famandrihana karatra, Ny SNCB dia miompana amin'ny filan'ny tsirairay.
Ny lamasinina matetika no any Bruxelles – Ghent, Antwerp – efa nampiasaina, Bruxelles – Namur. Azonao atao ihany koa ny mandeha any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina any Eropa amin'ny alàlan'ny lamasinina SNCB.
Manerana ny orinasa, akaiky 20,000 ireo mpiasa miasa amin'ny tambajotram-by sy ny bus dia miantoka ny fahatongavan'ireo mpandeha amin'ny toerana alehany isan'andro.
Mandeha Tehirizo ny tranokala fiaran-dalamby na ampiasao ity widget ity hikarohana azy manofana tapakila ho an'ny SNCB
– Mitsitsia lamasinina iPhone iOS App
Topy hevi-baovao hahazoana tapakila fiaran-dalamby SNCB mora vidy
isa 1: Mandefasa mialoha ny tapakilan'ny SNCB arak'izay azonao atao
Ny vidin'ny Tapakila fiaran-dalamby SNCB miakatra rehefa manakaiky ny andro fitsangatsanganana. Azonao atao ny manangom-bola amin'ny alàlan'ny famandrihana ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SNCB araka izay azo atao amin'ny andro fiaingana. Ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SNCB dia misy hatramin'ny voalohany 3 ny 6 volana mialoha ny fialan'ny lamasinina. Ny famandrihana mialoha dia manome antoka fa hahazo ny tapakila fiaran-dalamby SNCB lafo indrindra ianao. Voafetra ihany koa ny isa, ka vao haingana ianao no manafatra, ny mora kokoa ho anao. Mitahiry vola amin'ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SNCB, mividy ny tapakilan'ny ASAP.
isa 2: Mandehandeha amin'ny SNCB mandritra ny fotoana tsy an-tampony
Ny tapakilan'ny lamasinina SNCB dia mora kokoa mandritra ny vanim-potoana tsy misy hatak'andro, amin'ny fiandohan'ny herinandro, ary mandritra ny andro. Afaka mahazo antoka ianao fa mahazo fiaran-dalamby mora kokoa tapakila ao anatin'ny herinandro. Amin'ny talata, Alarobia, sy Alakamisy, Ny tapakilan'ny lamasinina SNCB no be toekarena indrindra. Noho ny habetsahan'ny mpandraharaha mandehandeha manao asa maraina sy hariva, Ny tapakilan'ny fiaran-dalamby dia mitentina lafo kokoa mandritra ireo ora ireo. Mora lavitra lavitra ny mandeha amin'ny fotoana rehetra, eo anelanelan'ny maraina sy alohan'ny hariva. Ny faran'ny herinandro dia fotoam-pitsarana hafa ho an'ny fiaran-dalamby, indrindra ny zoma sy ny asabotsy. Ny vidin'ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SNCB dia nitombo ihany koa tamin'ny ny fialantsasatra ary fetin'ny sekoly.
isa 3: Omeo baiko ny tapakila amin'ny SNCB rehefa azonao antoka ny fandaharam-potoanananao
Fiaran-dalamby SNCB tena mitaky mafy, ary miaraka amin'ny fifaninanana kely, izy ireo amin'izao fotoana izao no mijanona ho safidy ambony indrindra ho an'ny lamasinina any Belzika. Ny SNCB dia afaka mametra fameperana tapakilan'ny fiaran-dalamby toy ny iray izay mandrara ny fifanakalozana tapakila na famerenam-bola raha tsy ny karazan'orinasa ticket. Na dia mbola misy tranokala forum ahafahanao mivarotra ny tapakila faharoa amin'ny olona, Tsy mamela ny varotra tapakila faharoa ny SNCB. Ahoana no fomba hanampianao vola hitehirizana vola? Alao fotsiny ny tapakilan'ny tapakila raha azonao antoka fa hamonjy anao amin'ny famandrihana tapakila iray indroa ny tapakilanonao satria misy zavatra tonga ary tsy afaka mampiasa tapakila tany am-boalohany ianao.
isa 4: Vidio ny tapakila SNCB amin'ny Save A Train
Save a Train dia manana ny lehibe indrindra, ny tsara indrindra, sy ny tapakila mora indrindra ho an'ny tapakilan'ny lamasinina any Eropa. Ny fifandraisantsika amin'ireo mpandraharaha ny lalamby, loharanom-baovao momba ny tapakilan'ny lamasinina, ary ny fahalalantsika ireo algorithma momba ny teknolojia dia manome ny fidirana Save A Train amin'ny fifanarahana tapakila mora indrindra. Tsy manolotra tolotra tapakilan'ny lamasinina mora fotsiny ho an'ny SNCB irery izahay; manome toy izany koa izahay ho an'ireo safidy hafa amin'ny SNCB ary mirehareha amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra amin'ny tsenan-dalamby izahay.
Ohatrinona ny tapakila SNCB?
Ny tapakilan'ny SNCB dia manomboka amin'ny € 2,5 ka hatramin'ny € 20 ho an'ny dia lamasinina tokana. ny vidin'ny tapakila fiaran-dalamby SNCB Miankina amin'ny karazana tapakila fidianao ary rehefa misafidy ny handeha ianao:
Malagasy € 2,50 – € 15.00 € 15 – € 30
Kilasy voalohany € 10.50 – € 20 € 21 – € 46
Fa maninona no tsara kokoa ny mitondra lamasinina SNCB, ary tsy mandeha amin'ny fiaramanidina
1) Tonga any amin'ny ivon'ny tanàna ianao. Tombony iray amin'ny fiaran-dalamby SNCB raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina. Fiaran-dalamby SNCB ary fitsangatsanganana lamasinina hafa rehetra na aiza na aiza ao amin'ny tanàna hatrany afovoany an'ny tanàna manaraka. Izy io dia mamonjy fotoana sy ny vidin'ny taksiam-piaramanidina avy any amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna. Mijanona ny fiaran-dalamby, moramora kokoa ny mankany amin'ny toerana mankamin'ny tanàna alehanao. Tsy maninona na aiza na aiza ianao, Bruxelles, Antwerp, efa nampiasaina, na Liege, tombony lehibe amin'ny fiaran-dalamby SNCB ny fijanonana afovoan-tanàna!
2) Ny fitsangatsanganana fiaramanidina dia mitaky anao tokony ho eny amin'ny seranam-piaramanidina farafahakeliny ora maromaro alohan'ny fotoana amin'ny sidinao. Tsy maintsy mandinika fisavana ianao alohan'ny hamela anao hiditra ao amin'ilay fiaramanidina. Miaraka amin'ny lamasinina SNCB, mila mijanona eo amin'ny fiantsonana kely noho ny fotsiny ianao 30 minitra mialoha. Rehefa dinihinao koa ny fotoana ilana anao hidirana eny amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna, ho tsapanao fa ny lamasinina SNCB dia tsara kokoa amin'ny lafiny fotoana fitetezana tanteraka.
3) Eo amin'ny lafiny rehetra, ny vidin'ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SNCB dia toa lafo kokoa noho ny tapakilan-drivotra. na izany aza, rehefa mampitaha ny fiampangana rehetra voarohirohy, Ny tapakilan'ny lamasinina SNCB dia manana fifanarahana vidiny tsara kokoa. Miaraka amin'ny vidin-javatra hafa toy ny saram-bidy izay tsy andoavanao vola amin'ny lamasinina, mandeha amin'ny SNCB azo antoka fa ny tsara indrindra.
4) Mora kokoa ny tontolo iainana ny lamasinina rehefa mampitaha lamasinina sy fiaramanidina ianao, ireo lamasinina dia hivoaka eny ambony. Mandoto ny rivotra ny fiaramanidina amin'ny alàlan'ny karbonina avo lenta. Ny lamasinina raha ampitahaina dia manome be tsy fandotoana karbonika fa ny fiaramanidina.
Inona no mahasamihafa ny kilasy voalohany sy ny faharoa??
Misy kilasy isan-karazany amin'ny tapakila SNCB ho an'ny teti-bola sy karazana mpandeha samihafa. Azonao atao ny mividy ny tapakila mahazatra ho an'ny kilasy voalohany na faharoa. Ohatra, ny kilasy faha-2 dia hifanaraka tsara kokoa amin'ny dia lavitra ary teti-bola mpandeha. Fa raha mitady toerana ahinjiro ny tongotrao ianao na tsia mpandeha raharaham-barotra ary te hiasa mandritra ny dia ataonao, avy eo kilasy voalohany dia mety aminao.
Misy famandrihana SNCB ve?
Ho an'ny olom-pirenen'i Belzika, misy karazana famandrihana isan-karazany, ny tapakila Unlimited Season, ary ny vanim-potoana mahazatra. Ho an'ny International dia manome soso-kevitra ny hividy ela be mialoha izahay ary avy eo hanana ny safidy mora indrindra ianao.
Ireo karatra roa ireo dia azo vidiana amin'ny:
– Kaontera tapakila SNCB.
– Fampiharana SNCB.
Tapakilan SNCB mahazatra:
Ny tapakila mahazatra dia ny tapakilan'ny lamasinina miovaova be indrindra atolotry SNCB. Noho izany, afaka mandeha na aiza na aiza any Belzika miaraka amin'ny tapakila mahazatra ianao. Tokony homarihinao fa ny tapakila mahazatra dia nividy an-tserasera, tsy azo averina. na izany aza, raha nisy fiovana drafitra, azonao atao ny mamerina na mifanakalo ny tapakila amin'ireo mpanisa tapakila. Ankoatry ny, misy ity serivisy ity, iray andro alohan'ny datin'ny fiainganao, na ho an'ny 30 minitra aorian'ny nividiananao ny tapakila.
Tapakilan'ny fianakaviana lehibe
Ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviana dia afaka mankafy fihenam-bidy lehibe amin'ny tapakilan'ny SNCB. Ohatra, zaza ambanin'ny 12 mandeha malalaka, ary hatramin'ny 50% amin'ny tapakila mahazatra ho an'ny olon-dehibe sy ankizy mihoatra ny 12. Ary, miaraka amin'ity tapakila ity, afaka mandeha amin'ny lamasinina SNCB rehetra ianao.
Marina ity karatra ity miaraka amina karatra famantarana sary, izay tokony hahitana ny taonan'ny tompon'ny taona.
Tapakilan'ny Season mahazatra
Ny olom-pirenena belza dia afaka mividy ny tapakila mahazatra, ary mankafy ny dia tsy voafetra amin'ny zotra iray ihany. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ho an'ny vidin'ny 10 volana famandrihana, afaka mivezivezy amin'ny lafiny roa isaky ny maniry izy ireo.
Tapakilan'ny faran'ny herinandro
Ny tapakila faran'ny herinandro dia manan-kery ny zoma-alahady, miaraka amin'ny 50% fihenam-bidy amin'ny toeran-kaleha rehetra any Belzika. Noho izany, manomboka amin'ny 7 amin'ny zoma hariva, afaka mandeha na aiza na aiza manerana an'i Belzika ianao, amin'ny kilasy 1 na 2. Ankoatry ny, ireo teny manokana ireo dia miitatra amin'ny fialan-tsasatra ho an'ny daholobe ihany koa.
Bruxelles mankany amin'ny vidin'ny Ghent Train
Antwerp mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Ghent
Halle mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby Ghent
Bruges mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby Ghent
Mandra-pahoviana vao tonga ny SNCB?
Sarotra ny marina tsara, fa Save A Train dia manoro hevitra ny hahatongavanao 30 minitra alohan'ny fotoana hiainganao. Miaraka amin'ity fe-potoana ity, hanana fotoana ampy koa ianao hiantsenana ny zavatra ilainao manao ny dianao lamasinina ahazoana aina araka izay azo atao.
Inona ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina SNCB?
Afaka mahita izany amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny pejin-tranonkalanay amin'ny Save A Train ny fandaharam-potoana SNCB Train, Ampidiro fotsiny amin'ny toerana misy anao sy ny toerana tianao haleha, dia hasehonay aminao ny fampahalalana.
Bruxelles hampiakatra ny vidin'ny Liege Train
Iza amin'ireo gara no aroson'ny SNCB?
Ny tobin'ny Bruxelles an'ny SNCB dia Bruxelles – foibe, izay eo afovoan'i Belzika.
Gara SNCB afovoany iray hafa ao Antwerp, Fiaran-dalamby SNCB miainga ary tonga ao amin'ny Station Central Antwerp, akaikin'ny hotely Blue Astrid tsara tarehy. Antwerp Central no gara fijanonana faharoa be atao indrindra any Belzika.
Miala any Ghent ny fiaran-dalamby SNCB Ghent Saint Pieters peo, izay tanàna fahatelo lehibe indrindra ao Belzika ary lehibe indrindra ao Flanders.
Liege, Liege Guillemins no tobin'ny gara afovoany SNCB. Ary noho izany, Ny gara gara Liege dia mampitohy an'i Belzika amin'ireo firenena mifanila aminy, mahatonga azy io ho iray amin'ireo fiantsonan'ny fiaran-dalamby be olona indrindra ao Wallonia. Ary, raha mikasa ny handeha ho any Alemana ianao, Frantsa, Luxembourg, na Netherlands avy any Belzika, tsara kokoa raha tehirizo mialoha ny tapakilan'ny lamasinina SNCB anao.
efa nampiasaina (Brugge – Anaran-tanàna mitovy amin'ny fiteny malaza iray hafa) gara no fiantsonan'ny lamasinina SNCB hafa any Flanders. Ohatra, avy any Bruges, azonao atao ny manafatra ny tapakilan'ny lamasininao mankany amin'ny hafa destinos any Belzika: Ghent, Antwerp, ary Bruxelles afaka adiny iray latsaka. Ny gara Bruges dia any a 20 minitra mandeha lavitra ny afovoan-tanàna, ary ny kianja Old City Markt tsara tarehy.
Gara gara SNCB any Leuven no gara lehibe indrindra ao amin'ny faritr'i Flemish Brabant any Belzika. Io gara io no miasa mampifandray ny faritra Flemish amin'ny faritra hafa ary iray amin'ireo tampony 5 gara akaiky indrindra any Belzika. Noho izany, ianao dia afaka fiaran-dalamby Tsidika ho any Brussels, Seranam-piaramanidina Bruxelles, Leuven, Antwerp, ary amin'ny ankapobeny ny tanàna rehetra any Belzika.
Mechelen na Malinas, ao an-tanànan'i Mechelen, dia iray amin'ireo gara SNCB afovoany any Belzika ihany koa. Ho hitanao eto 10 sehatra, manompo ny zotra fiaran-dalamby Intercity, ao anatin'izany ny seranam-piaramanidina Bruxelles avy any Antwerp. Ankoatry ny, azonao atao ny mividy ny tapakilan'ny SNCB mankany Amsterdam, ary Luxembourg, amin'ny alàlan'ny Antwerp sy Bruxelles.
Afa-kevitry ny basikety ve ny bisikileta? Lamasinina SNCB?
Avela handeha bisikileta amin'ny lamasinina SNCB. Raha manana bisikileta azo mivalona ianao, dia azonao atao ny miakatra amin'ny fiaran-dalamby, tsy andoavam-bola. na izany aza, ireo karazana bisikileta hafa dia handoa anao fanampiny 4 € amin'ny tapakilan'ny fiarandalambinao.
Mivezivezy maimaimpoana amin'ny lamasinina SNCB ve ny ankizy?
Eny, fa hatramin'ny taona iray ihany. Ankizy izay tanora kokoa noho ny taona 12 handeha maimaim-poana rehefa miaraka amin'ny mpandeha efa lehibe.
Omena alalana amin'ny lamasinina SNCB?
Eny, afaka mitondra ny biby fiompinao amin'ny lamasinina ianao, amin'ny € 3 isaky ny dia. na izany aza, ny biby dia tokony ho eo amin'ny firaka na ao anaty kitapo, na harona.
Inona avy ireo fomba fiasa amin'ny SNCB?
FAQ SNCB be fangatahana indrindra – Mila manafatra seza mialoha ve aho amin'ny SNCB?
ianao afaka reserve ny fantatroamin'ny mialoha an-trano SNCB fiarandalamby. ianao will manovoza seza aorian'ny famandrihana, saingy tsy ilaina izany.
Misy Internet Wi-Fi ao anatin'ny SNCB?
tsy misy. Tsy misy maimaim-poana Wifi Internet amin'ny lamasinina SNCB. Afaka mankafy Wi-Fi maimaim-poana ao amin'ny gara SNCB ianao.
Raha efa namaky hatreto ianao, fantatrao izao izay ilainao ho fantatra momba ny lamasinina SNCB ary vonona ny hividy ny tapakilan'ny lamasinina SNCB anao Save A Train.
NSB Vy Norvezy SBB Suisse
Te hampidirina amn'ny tranokalanao ity pejy ity? kitiho eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sncb%2F%3Flang%3Dmg– (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code), Na azonao atao rohy mivantana ao amin'ity pejy ity.
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml ary azonao atao ny manova ny / fr ho / nl na / es ary fiteny maro hafa.